कोहलपुर एक्सप्रेस एस्तो छ - NpNepalNews
Home›भिडियो›कोहलपुर एक्सप्रेस एस्तो छ
कोहलपुर एक्सप्रेस एस्तो छ
अभिनेत्री केकी अधिकारीको पहिलो निर्माण रहेको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ को शीर्ष गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक भएको छ । बिशाल भण्डारी निर्दे्शित फिल्मको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो। गीतमा काली प्रसाद बास्कोटाको शब्द, संगीत तथा स्वर रहेको छ।
यसअगाडि सार्वजनिक भएका फिल्मको २ वटा गीत ‘सिओ डब्लु काउ’ र ‘अब मन सँग मन’ ले खासै चर्चा नपाएपनि कमजोर भएपनि यो गीत पावरफूल रहेको बताइएको छ। कालिप्रसाद बाँस्कोटाको स्वर र संगीत समावेश गरिएको यो गीत रोचक किसिमको छ।
फिल्ममा ऋचा शर्मा, प्रियंका कार्की, बुद्दी तामाङ, रविन्द्र झा, कुशाग्र भट्टराई लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। अर्जुन तिवारीको छायाङ्कन रहेको फिल्ममा केकी निर्मात्रीको रुपमा छिन्। नायिका केकीको यो पहिलो फिल्म हो जसमा उनले निर्माणपनि गरेकी छिन्।
साथै भद्र बहादुर शाही, देवी लाल न्यौपाने पण्डित र शिव प्रसाद चौलागाई ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ को निर्माताका रुपमा रहेका छन् । शान बस्नेतको कथा र लोकेश बज्राचार्यको सम्पादन रहेको यो फिल्मले तीन युवतीको कथा भन्नेछ । फिल्म बैशाख १४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
अभिनेत्री ज्याक्लिन मार्सल आर्ट सिक्दै छिन : ...
युएई बाट भागिन दुबई कि राजकुमारी ? ...
कार दुर्घटनामा गायिकाको मृत्यु भएपछि चाइनिज गित नेपालमा भाइरल (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
दिपिका रणवीरले किने आलिशान बंगला, सँगै बस्ने तयारी
कस्तो अचम्म ! बाख्राले जन्मायो मान्छे जस्तो बच्चा, हेर्नेको घुँईचो (भिडियो सहित)
रवि लामिछानेको आलोचना गरेर चर्चित हुन खोज्नेले भेट्यो यस्तो झटारो -भिडियो सहित
केहि मिनेटमा नै सजिलै तरीकाले माछालाई यसरी मर्न सकिन्छ – हेर्नुस भिडीयो !
ऋचा र क्रिष्टिनाबिच किन भएको थियो झगडा? जान्नुस् वास्तविकता :: भिडियो हेर्नुहोस >>>
अब अनलाइनबाटै लाइसेन्सको आवेदन फारम भर्न सकिने, यस्तो छ तरीका
सामाजिक संजालमा फेरी लिक भयो एक जोडीको आपत्तिजनक अवस्था(भिडियो) Newsline